सङ्घीय व्यवस्थाले समाजवाद ल्याउने रे ! - Bhaktapur Radio
उमा महेश्वरको मूर्ति नेपाल फर्काउन पत्राचार | आस्था साँस्कृतिक परिवारको १७औं स्थापना दिवस | क्युवाली समाजवादप्रति प्राध्यापकहरुको ऐक्यबद्धता | का. रोहितसित बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलको भेट | ख्वप अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन | अध्यक्ष बिजुक्छेँद्वारा अक्सिजन प्लान्ट उद्घाटन | घ्यू तथा खानेतेलमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि | ट्याङ्कर चालकले रोके पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी | लान्चापलीको शिलान्यास | चीनबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरूमा वितरण |
गृहपृष्ठ › राजनीति › सङ्घीय व्यवस्थाले समाजवाद ल्याउने रे !
सङ्घीय व्यवस्थाले समाजवाद ल्याउने रे !
कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । श्रमिक र बौद्धिक काम गर्ने व्यक्ति श्रमजीवी वर्गमा पर्दछ । माक्र्सवादीहरु द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दर्शन मान्छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद द्वन्द्वमा आधारित दर्शन हो । यसकारण सद्दे कम्युनिस्टहरु परिवर्तनको निम्ति द्वन्द्व गर्छन् । किनकि संसारको इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास हो । श्रमजीवी वर्गको पक्षमा सङ्घर्ष नगर्ने कम्युनिस्ट हुनैसक्दैन । यसको अर्थ कम्युनिस्टहरु जहाँ पनि जहिले पनि बन्दुक बोकेर हिँड्छन् भन्ने होइन । तर, आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति मिल्यो भने परिवर्तनको निम्ति बन्दुक बोक्न तयार हुन्छन्, सेना पनि तयार गर्छन् । यो देश, काल र परिस्थितिमा भर पर्छ ।
भनिन्छ, प्रदिप नेपाल नेकपामा बुद्धिजीवी फाँटका व्यक्ति हुन् । उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी र दलाल पुँजीपतिबीचको अन्तरविरोध प्रधान हुने बताए । श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने नेकपाका सञ्चालकहरु राष्ट्रका दलाल पुँजीपतिहरु भएको विचार पनि उनले पोखे । तर, उनले नेपाललाई कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएको देश भन्ने कि राज्य संयन्त्रमा दलाल पुँजीवादको नेतृत्व भएको देश भन्नेबारे पर्गेल्न सकेनन् या बहसको विषय ठाने । नेकपाको बुद्धिजीवी फाँटमा काम गर्ने उनले क्रान्ति पूरा गर्न बन्दुक, जनसेना नचाहिने बताए या चाहने व्यक्तिलाई कसैले कम्युनिस्ट नभने पनि हुन्छ भनी ठोके । माओवादीले गरेको ‘जनयुद्ध’ को असफलतालाई उनले यसको उद।हरण माने । बुद्धिजीवी प्रदीप नेपालका यो उदाहरण सटिक छैन । त्यो ‘जनयुद्ध’ देशको आन्तरिक परिस्थिति तयार नहुँदै भएको थियो, बाह्य परिस्थिति पनि बनेको थिएन । जनता सचेत, सङ्गठित नहुँदै गरिने ‘युद्ध’ सफल हुँदैन । परिस्थिति तयार नहँुदै बन्दुक उठाएर युद्ध सफल हुँदैन । त्यसकारण माओवादी ‘जनयुद्ध’ असफल भएको हो । त्यस्तै असफल विगतमा मालेले गरेको व्यक्तिहत्या पनि भएको थियो । त्यो गलत राजनीति थियो । व्यक्तिहत्याले परिवर्तन सम्भव छैन । माओवादीले परिस्थिति तयार नहँुदै गरेको ‘जनयुद्ध’ असफल भयो भनेर सङ्घर्षै गर्ने दल नै कम्यरनिस्ट नहुने प्रदीप नेपालको ठम्याइ र बुझाइले ‘बुद्धिजीवी’ को तक्मामा चोट परेको छ, ठेस लागेको छ ।
सङ्घीयताले समाजवाद ल्याउने विश्वास लेखक नेपालको रहेको छ । त्यो पुँजीवादी समाजवाद हुनेछ । पुँजीवादी समाजवाद कम्युनिस्टको हुनेछैन । नेकाले चाहेको समाजवाद पुँजीवादी समाजवाद हो । नेकाको जस्तो पुँजीवादी समाजवाद नै नेकपाको आजु ठान्ने नेकपाका नेताहरु कम्युनिस्टको बखान गरेर, कम्युनिस्ट बनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सिद्धान्त र विचार विपरित लागिरहेको छन् । यो देशकै विडम्बनाको विषय हो । पार्टीको पथप्रदर्शक माक्सवाद लेनिनवाद राख्ने, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने तर काम र व्यवहार सबै पुँजीवादी राजनीति गर्ने ! यही सङ्घीय व्यवस्थाले समाजवाद ल्याउने रे ! पुँजीवादी समाजवादले श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैन ?
वैज्ञानिक समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ, अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त हुन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुँदैमा वैज्ञानिक समाजवाद आएको मानिँदैन । कम्युनिस्टहरु आर्थिक समानताको कुरा पनि उठाउँछन् , काम मामको व्यवस्था गर्छन् । श्रमजीवी वर्गको हितमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त हुन्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता निजीकरण गरिएको हुदैँन । भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोरमाथि कडा कारबाही गरिएको हुन्छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति कुम्ल्याउने, अनियमितमा गर्ने, बेपत्ता पार्ने, बलात्कार गर्ने, हत्या हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही गरिएको हुन्छ । बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन बनाइएको हुन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिएको हुन्छ । ठूलठूला उद्योग, कलकारखाना सरकारीकरण गरिएको हुन्छ ।
मङ्गल ग्रहः तीनवटा भूमिगत ताल पत्ता लागेको दाबी
एमसीसीविरुद्ध दैलेखमा कार्यक्रम